Uploading site တွေပြောင်းရအောင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Uploading site တွေပြောင်းရအောင်
16-04-2007, 03:14 AM
အခု ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက ခုကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ uploaded.to ပေါ့။ အဲဒါကတော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ သူက ၇ ရက်ပြည့်တာနဲ့ အကုန်ဖျက်တာပဲ။ ဒီတော့ ဒုက္ခသိပ်ရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဖိုရမ်ကို upload တင်သူများဟာ အခြားအသင်းဝင်တွေပါ အဆင်ပြေအောင် ၊ ကြာရှည်လဲခံအောင် www.mediafire.com , www.megaupload.com, www.rapidshare.com ဒီ သုံးခုကိုသာ အဓိကထားသုံးစွဲပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဲ...ပြောဖို့ကျန်သွားတာ။ ဟိုတနေ့ကပဲ ကိုဇော်( KZaw) လာပြောလို့သိတယ်။ www.mihd.net ပေါ့။ ဒီဆိုဒ်ဆို အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး။ နိုင်ငံ အိုင်ပီတွေကို ဘန်းတာမရှိဘူး။ ပြီးတော့ ကျန်တဲ့အချက်တွေလည်း ကောင်းတယ်။ မြန်မာကလည်း ဒေါင်းလုဒ်ချလို့ရတယ်။ ကဲ ...ဒီနေ့ပဲ စမ်းသုံးကြည့်ကြတာပေါ့...အားလုံး။ အဆင်ပြေရင် ၀မ်းသာစရာပါ။ သူက ဖိုင်တစ်ခုကို ၂ ဂစ်နီးပါး ရတာဆိုတော့ တယ်ဟန်ကျတာပဲ။ ပြောပြပေးတဲ့ ကိုဇော်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း....။
Last edited by Ye Naung; 16-04-2007 at 03:27 AM..
ကိုဂျိန်း, ဖယောင်း, သက်နိုင်, အမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, fairywin, goldstar, kyawtoe, lynn htet, minthumon, moe san dar, Trio, yelinoo, zo
16-04-2007, 04:36 AM
Re: Uploading site တွေပြောင်းရအောင်
ကျွန်တော် www.uploaded.to ကနေတင်ထားတာတွေကို ဖျက်ပစ်ဦးမှပါ ..
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ .. BYE THE WAY ...ကိုရဲနောင်ကြီးနေကောင်းသွားပြီလားဗျ ။။
Last edited by ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an); 16-04-2007 at 04:37 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, Empathlover, kyawtoe, moe san dar, yelinoo, zo
ကောင်းသွားပါပြီဗျာ။ ကိုငြိမ်းချမ်းတို့ကတော့ ခါတော်မှီ လေးတွေသိပ်ရတာပဲ။ ပိတောက်လေးတွေထည့်လို့။ ဟားဟား။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သူကတော့Upload up to ten files (300MB limit for each file)ပါတဲ့
အဲဒီ ဆိုဒ် လဲမိုက်ပါတယ်.. photo တွေအတွက်က photobucket ဆိုတဲ့ဆိုဒ်ရှိသေးတယ်.. မိုက်တယ်ဗျ.. သုံးကြည့်ကြပါ... www.photobucket.com ပါ...
Originally Posted by PuToo
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, kyawtoe, moe san dar, yelinoo, zo
ဒါတွေထဲမှာ 80 MB အောက်ဆိုရင်တော့ http://dl4.ohshare.com/ ကတော်တော်လေး အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ် ၊ မြန်လည်းမြန်ပါတယ် ။
ဒီကနေသွားလို့ရပါတယ် . . ရှင်းလင်းချက်မူရင်းတွေကို သေသေချာချာဖတ်ချင်ရင်ဖတ်လို့ရအောင်ပါ
င်္တခြားကောင်းတာလေးတွေရှိရင်လည်း ပြောကြပါဗျို့ . .`
ကိုရဲနောင်ပြောတဲ့ Rapid က under proxy တွေအတွက် အဆင်မပြေပါဘူးအကိုရယ် . . ပြီးတော့ Premium User မဖြစ်နိုင်တာကိုလည်း စိတ်ညစ်အောင်လာ ကလိနေတာလေ . .
တစ်ဆက်တဲမှဘဲ http://mihd.net/ က Upload [ max 200 MB ] လို့ရေးထားတာပဲတွေ့ရတယ် အကိုရေ . . ကျန်တာတွေတော့ အကိုပြောတဲ့ အတိုင်းပါပဲ . .
တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေက ကျွန်တော် http://www.mysteryzillion.com/forum/ မှာတင်ထားပြီးသားတွေပါ အဲဒီကိုမရောက်ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်း သိသွားရအောင် နည်းနည်းဖြည့်ပြီး ရေးထားတာပါ . .
ညီအကို မောင်နှမများအားလုံး ပျော်ပျော်ကြီး Share လုပ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ . .
ကိုဂျိန်း, ဖယောင်း, အမောင်, မောင်သံသရာ, Empathlover, kyawtoe, minthumon, moe san dar, phoetharlay, Trio, yelinoo, zo
26-05-2007, 08:35 AM
www.mihd.net က အရင်တုန်းက2Gb ရတာအမှန်ပါပဲ။ အကိုတို့လည်း စမ်းသုံးဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ တင်တဲ့သူတွေ လှိမ့်များလာလို့လားမသိဘူး။ လျှော့ချသွားတာ။ တကယ်တန်း2Gb ဆိုရင် ဘယ်သူခံနိုင်မှာလဲ။ သူလည်း ...မနိုင်ပဲ ပဲကြီးဟင်း စားကြည့်တာနေမှာ။ အဲလိုမျိုးတွေကို free ပေးဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်ပါဘူး။ သူတို့ဘက်က စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများအတွက် storage space တွေ အလကားလိုက်ပေးနေရတာ။ ဟားဟားဟား။
ကိုဂျိန်း, ကိုသဝေထိုး, မောင်သံသရာ, မောင်မောင်မင်းအောင်, Empathlover, kyawtoe, minthumon, moe san dar, yelinoo, zo
ဖို၇မ်မှာ အားကိုးရမယ့် မမ်ဘာတိုးလာသလိုပဲ...
Last edited by zthet; 26-05-2007 at 11:36 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ zthet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, Empathlover, moe san dar, yelinoo, zo
http://dl4.ohshare.com/ကတော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
ဖယောင်း, မောင်သံသရာ, Empathlover, minthumon, moe san dar, yelinoo, zo
26-05-2007, 02:38 PM
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ dl4.ohshare မှာ ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ Absolute MP3 Splitter Converter ကို ချက်ချင်း Download ပြန်လုပ်ကြည့်တာ 2.1 MB အတွက် ၁၅ စက္ကန့် ပဲကြာပါတယ်။
်fileanny.com ကတော့ ၄ မိနစ်လောက်ကြာတယ်ခင်ဗျ . .
မောင်သံသရာ, Empathlover, minthumon, yelinoo, zo
ကျေးဇူးပဲ.. ကျွန်တော်က media fire သုံးတာ.. နည်းနည်းကြာလို့.. ပိုကောင်းမယ့်ဟာရှာနေတာ..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Saturngod အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, Empathlover, yelinoo, zo
ကျေးဇူးပဲ.. ကျွန်တော်က media fire သုံးတာ.. နည်းနည်းကြာလို့.. ပိုကောင်းမယ့်ဟာရှာနေတာ.. အခုတော့ရပြီ..
Last edited by Saturngod; 11-06-2007 at 12:28 AM..
IFile နည်းတူ Upload တင်လို့ရမယ့် ဆိုဒ် တစ်ခုပါ
IFile နည်းတူ Upload တင်လို့ရမယ့် ဆိုဒ် တစ်ခုပါ..
ခုနောက်ပိုင်း တချို့စက်တွေ Ifile.it က Connection ပြတ်သွားသလိုလိုနဲ့..
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ကိုမိန်နွယ်, ကိုဦး, ဆန်းမောင်, ဇာနည်မောင်, ဒဿဂီရိ, ဖယောင်း, ကျော်ထက်ချိန်, ဇေယျာမင်းထက်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, နိုင်သူရ, bonge, chitnyimalay, Empathlover, minthumon, moe san dar, phoetharlay, phyothuhein, sawjonnie, tu tu, yelinoo, zo
Upload နဲ့ Download ဟာအလိုအပ်ဆုံးပါ...
မသိမဖြစ်ထဲမှာ အရင်က ဖိုရမ်လူကြီးမင်းများသင်ပြဘူးတာတွေကြောင့်
ဂျူနီယာတို့လဲ upload download သိခဲ့တာပါ..
ခုနောက်ပိုင်း upload တွေအဆင်မပြေတော့ပါဘူး..
လွယ်ကူတဲ့ ifile ကို အဓိကထားပြောကြားရခြင်းပါ..
ဒါပေမယ့် အများသုံးပြုလို့ရမယ့်..လွယ်ကူတဲ့ ..uploadဆိုဒ်များကိုတော့ ..ဖိုရမ်ကလူကြီးမင်းများက
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖယောင်း, သူသူလေး, ဇေယျာမင်းထက်, ငြိမ်းချမ်း, chitnyimalay, Empathlover, moe san dar, yelinoo, zo
ပြန်စာ - အကြံပြုပါရစေ..
အမပြောတာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ifile က အခုရက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ Upload ဆိုရင်လဲ 6%aလောက်အထိပဲတင်လို့ရတာတွေအများကြီးနဲ့Downloadဆိုရင်လဲ 100%ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိုင်ကဖွင့်လို့မရ တာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လဲမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ifile လင့်ကအဆင်မပြေဖြစ်နေတာပါ။
အခု အမပြောလို့ ပိုးကောင်လေး စမ်းကြည့်ထားတာပေါ့နော်။ နောက်ထပ် စမ်းလို့ရတဲ့လင့်တွေကိုလဲ ပြန်ပြော ပေးပါ့မယ်။ အခုလောလောဆယ် ပိုးကောင်လေး ကွန်နက်ရှင်ကို (Bagan;MPT) လိုင်းနှစ်လိုင်းမှာ တင်ရတာအဆင်ပြေပြီးတော့ နည်းနည်းအဆင်ပြေမယ့်လင့်လေးတွေအောက်မှာပေးထားပါတယ်။ အဆင်မပြေတာရှိရင် ပြန်ပြောထားပေးလေး နောက်ထပ်အကိုအမတွေလဲ ထပ်ရှာပေးမှာပါ။ လောလောဆယ်တော့ Upload မြန်ပြီးတော့ အားလုံးအဆင်ပြေနေတာက . . . .
အခုလင့်တွေကတော့ 5MB လောက်ထိကို အလျင်အမြန်နဲ့တင်လို့ရပါတယ်အမ။ မြန်မာနိုင်ငံကအခြားသူတွေ လဲ 4shared တို့ sendspace တို့ဆို ဒေါင်းရတာလဲလွယ်ပါတယ်။ Upload; Download အားလုံး အဆင်ပြေ ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, ဖယောင်း, လွမ်းလှိုင်းဝေ, သူသူလေး, ဇေယျာမင်းထက်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, chitnyimalay, Empathlover, ma mee, maJunior, minthumon, moe san dar, tu tu, yelinoo, zo
ကျွန်တော်လည်း ဒီထဲမှာပဲ နည်းနည်း ၀င်ပြောလိုက်တော့မယ်..upload တင်ရင် ဆိုဒ်လေးတွေပါ ဘေးနားမှာ ရေးပေးကြပါလို့
လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့..ကျွန်တော်တို့လို ကွန်နက်ရှင် မကောင်းဘဲ သုံးနေရတာတွေဟာ အများကြီးပါ..
အဲဒီတော့..ဒေါင်းလုပ် လုပ်ဖို့ကို လင့်ကို အရင်ဖွင့်..ပြီးတော့မှ ကိုယ့်စက်နဲ့ ဒေါင်းနိုင်. မနိုင်ဖိုင်ဆိုဒ်ကို အရင် အချိန်ကုန်ခံပြီး ပြန်ကြည့်နေရပါတယ်..တင်တဲ့သူတွေကတော့ ..ဆိုဒ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကို..စာလုံးလေး ၂ လုံး ၃ လုံးပိုရေးပေးလိုက်တာ အပန်းမကြီးဘူး လို့ထင်ပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း Upload တင်ပေးနိုင်တဲ့ ကွန်နက်ရှင် မရှိတာကြောင့် ပြောရတာလဲ အားနာပါတယ်..အမှားပါရင် လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ....
သူသူလေး, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, chitnyimalay, Empathlover, maJunior, minthumon, moe san dar, phyomyintthein, tu tu, yelinoo, zo, Zorro
30-12-2009, 02:25 PM
အောက်မှာရှိတဲ့ link လေးတွေကလဲ အဆင်ပြေပြေနဲ့လွယ်ကူစွာ file Upload လုပ်နိုင်ပါတယ်..ဆိုတာလေးရှာဖွေထားပေးပါတယ်..
Last edited by maJunior; 30-12-2009 at 02:25 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဖယောင်း, သူသူလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, chitnyimalay, Empathlover, goldstar, minthumon, moe san dar, phoetharlay, tu tu, Ye Aung, zo, Zorro
မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။ ပိုးကောင်လေးပေးထားတဲ့လင့်တွေထဲကနေ ဖိုင်တွေကို Upload; Download အဆင်ပြေ ဖို့အတွက် ပုံလေးတွေနဲ့နည်းနည်းပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အမှားများရှိပါက ပိုးကောင်လေးရဲ့ အမှားများတာဖြစ် တာကြောင့် အားလုံးသည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
sendspace ဆိုဒ်ကနေ Upload တင်ရအောင် . . .
ပထမဆုံး sendspace မှာ အကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အကောင့်နဲ့ဝင်ပါ။ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီတိုင်းလဲတင်လို့ရပါတယ်။ Account လုပ်ရတာလဲမခက်ပါဘူး။ အလွယ်တကူနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Account နဲ့ဝင်တော့ မိမိရဲ့ဖိုင်တွေကိုသိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ အကောင့်ရှိရင်တော့ www.sendspace.com ကိုသွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒီလင့်ကနေ အကောင့်မရှိရင် အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ အကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ username နဲ့ password ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ အကောင့်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
အဲဒီပုံလေးအတိုင်းမြင်ရပြီဆိုရင်တော့ Upload ဆိုတဲ့ Tag လေးရှိပါတယ်။ (အပေါ်ပိုင်းနားမှာ) Upload ဆိုတဲ့ Tag လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Click Upload > ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အောက်ကပုံလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ Select File* ဆိုတဲ့ box လေးဘေးနားက Browse ကနေ မိမိတင်ချင်တဲ့ဖိုင်ရှိတဲ့နေရာကို မိမိကွန်ပြူတာ၊ အခြား Drive တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ ညွှန်းပြပေးပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ Description (Optional) မှာဖိုင်နံမည် သို့ အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုရေးလို့ရပါတယ်။ မရေးချင်ဘူးဆိုရင်လဲဒီတိုင်းထားလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
နောက်ဆုံးboxလေးတစ်ခုကတော့ Recipient’s email (Optional) လို့ပြထားပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာတော့ မိမိကနေ မိမိသိတဲ့သူငယ်ချင်းကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့email address အဲဒီနေရာမှာ လေးကိုထည့်ပေး လိုက်ပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ မထည့်ဘဲဒီတိုင်းထားလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ပြီးရင်တော့ အောက်မှာ check box လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီ check box လေးမှာ မိမိemail address မှာလဲလင့်ချန်ထားစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမှန်ခြစ် (Green button) လေးဖြစ်အောင် check ပေးလိုက်ပါ။ မိမိ email မှာ မချန်ခဲ့ချင်ဘူးဆိုလဲမပေးလဲရပါတယ်။
Sign in User (Register User) တွေမဟုတ်ရင်တော့ သူ့ဆိုဒ်ကမေးထားပါလိမ့်မယ်။ I have read and agree to the terms and service လို့ပြောထားပြီးတော့ check box လေး တစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါမှာဆိုရင်တော့ Check box လေးမှာ အမှန်ခြစ်လေး လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ခြစ်မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်တော့ Upload တင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ Upload File ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီ Upload File ဆိုတာလေးကို ကလင့်လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဖိုင်လေးကိုအလွယ်တကူတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
File Upload တင်နေပုံလေးက
အောက်မှာတော့ ဖိုင်တင်ပြီးကြောင်းကိုပြသထားတဲ့ပုံလေးနဲ့Download link ညွှန်းထားတဲ့ပုံလေးကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Send Space မှာ Upload တင်တာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Send Space ကနေ Download ချတာလေးကတော့ သိပ်မခက်ပါဘူး။ Sendspace လင့်ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုဖြစ်ဖြစ်၊ လင့်ကို copy; paste လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းမြင်ရမှာပါ။ Download ဆိုတာလေးကို ကလစ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ sendspace ဖိုင်များကို ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
Sendspace ကနေ Download;Upload အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (အမှားများရှိပါကသည်းခံနားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ။)
may big GOD bless for all!
ကိုဂျိန်း, ဒဿဂီရိ, ဖယောင်း, ရမဟ, ဇော်ရဲပိုင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, Aung Aung, bonge, chitnyimalay, goldstar, kyaukphyu, maJunior, minthumon, moe san dar, phoetharlay, phyomyintthein, tu tu, Ye Aung, zo, Zorro
ဒီတစ်ခါတော့ ပိုးကောင်လေး 4Shared Upload တင်တာနဲ့ Download ချတာလေးကို နည်းနည်းရှယ်ကြည့်တာပေါ့ ဗျာ။ Download ချတာကိုတော့ ဖိုရမ်မှာ Aung Aung ရှင်းပြီးသားရှိလို့ အောင်အောင်ရှင်းထားတာကိုပဲ ပြန်ညွှန်း လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြီးတော့မှ Sendspace; 4shared ကို WordFile; PDF File နဲ့ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
4Shared ကနေ Upload တင်နည်းလေးပါ။
http://www.4shared.com ဆိုတဲ့ 4shared ဆိုတဲ့ဆိုဒ်လေးကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Register (Sign Up) လုပ်လိုက်ပါ။ အကောင့်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ gmail address နဲ့ password ကိုသုံးပြီးတော့ 4shared အကောင့်ထဲဝင်လိုက်ပါ။
အဲဒီနောက်မှာတော့ မိမိတို့တင်ချင်တဲ့ဖိုင်ကို မိမိတို့ကွန်ပြူတာကနေဖြစ်ဖြစ်အခြားကနေဖြစ်ဖြစ် Upload တင်လို့ရပါပြီ။
My 4Shared အောက်နားမှာရှိတဲ့ Upload file Tag နဲ့ Multiupload Tag ကနေ မိမိတို့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်တည်း တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရိုးရိုး Upload Tag ကိုသုံးပြီးတော့၊ ဖိုင်အများကြီးတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Multiupload ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တင်နိုင်ပါတယ်။
Upload File တစ်ခုကိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့ Browse ကနေ မိမိတို့တင်ချင်တဲ့ဖိုင်ရှိရာကိုညွှန်းပြီးတော့ Upload ဆိုတဲ့ button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအခါမှာတော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။
ဖိုင်တင်ပြီးသွားရင်တော့ မိမိဖိုင်တင်ထားတဲ့လင့်ကိုအခြားသူတွေဝေငှဖို့အတွက် လင့်box လေးကိုချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကပေးထားတဲ့လင့်လေးကိုယူပြီးတော့ မိမိတို့ဖော်ပြချင်တဲ့နေရာမှာ ပြန်ပြီးတော့အလွယ်တကူဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ တချို့နက်နှေးတယ်ဆိုရင်တော့ လင့်ဖော်ပြထားတဲ့box လေးကျမလာရင်တော့ My 4shared ကနေ မိမိတင်ထားတဲ့ဖိုင်ရှိရာကိုသွားပြီးတော့ မိမိတင်ထားတဲ့ဖိုင်ရဲ့အောက်နားလေးမှာ Down arrow လေးနဲ့ Download tag; ခဲတံလိုမျိုး ပုံစံလေးနဲ့ Properties tag;အမှိုက်ပုံးပုံစံလေးနဲ့ Recycle တို့ကိုတွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီကနေ Properties tag လေးကို ကလစ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိဖိုင်ရဲ့ Properties box လေးကျလာမှာပါ။ အဲဒီကနေ Download link ဆိုတဲ့နေရာကနေယူပြီးတော့လဲ မိမိတို့ရဲ့ဖိုင်လင့်လေးတွေကိုညွှန်းပြလို့ရပါတယ်။ Download link ညွှန်းပြထားတဲ့ပုံလေးကိုအောက်မှာတချက်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
Multiupload လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ Multiupload ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Multiple File Upload ဆိုပြီးတော့ပွင့်လာပြီ Browse ကနေတဆင့်ဖိုင်များကိုတင်လို့ရပါပြီ။ Multiupload အတွက်ဆိုရင်လဲ မိမိဖိုင်တင်ပြီးတာနဲ့ ဖိုင်တင်ပြီးတဲ့အကြောင်းကို Info box လေးတစ်ခုတစ်ကျလာပြီးတော့ Uploading have been completed ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ 4shared မှာ Upload တင်ဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4shared ဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်းကိုအောက်ကလင့်လေးမှာအောင်အောင် (Aung Aung)ရှင်းထားပါ။
လိုအပ်ချက်များရှိပါကသည်းခံပေးကြပါခင်ဗျာ။ နောက်ထပ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလွယ်တကူတင်လို့ရတဲ့ Upload site တွေကိုလဲပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ (အခုလောလောဆယ်တော့ ပိုးကောင်းလေးစမ်းထားတာ MPT ကော၊ Bagan လိုင်းမှာပါ အောက်ကလင့်တွေလဲအဆင်ပြေနေပါတယ်ခင်ဗျာ။)
Last edited by poekaunglay87; 31-12-2009 at 03:47 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, ဒဿဂီရိ, ဖယောင်း, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, Aung Aung, bonge, chitnyimalay, goldstar, maJunior, minthumon, moe san dar, phyomyintthein, tu tu, zo, Zorro
အခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Ziddu Uploading ဆိုဒ်အကြောင်းပေါ့ဗျာ။ (နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ ဘယ်မှမထွက်ရတာနဲ့ ပျင်းပျင်းရှိ ဒီဆိုဒ်တွေအကြောင်းရေးဖြစ်နေတာပါ။ သောခံလိပြီးတော့ ဖတ်ပေးကြပါ။)
http://www.ziddu.com/ ဆိုတဲ့ဆိုဒ်လေးထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ Register လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ User Name နဲ့ Password သုံးပြီးတော့ ၀င်လိုက်ပါ။ Register မလုပ်ဘဲနဲ့လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အခုတော့ ရိုးရိုးအလွယ်ကော၊ Register နဲ့လုပ်တာကော နည်းနည်းလေးဆီ ပြောပြပေးထားပါတယ်။ အရင်ဆုံး website ကိုဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ အောက်ကအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ. . .
Ziddu ကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Register လုပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Register ကိုနှိပ်ပြီးတော့ မိမိတို့အတွက်အကောင့်ကိုပြုလုပ်လိုက်ပါ။ အကောင်ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ Login ကိုနှိပ်ပြီးတော့ အကောင့်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ အကောင့်မရှိသေးတဲ့လူဆိုရင်လဲ Upload File ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Upload File ဆိုတာလေးကို Click နှိပ်ပြီးတော့ ဖိုင်များကို Upload တင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုတော့ Register User တွေအတွက်အောက်မှာအသေးစိတ်လေးပါ။ Login ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Ziddu ရဲ့ Login Web page ကြီးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ Login Account ကနေ မိမိတို့ရဲ့ Email ID (မိမိရဲ့ email address; register လုပ်တုံးကအသုံးပြုထားတဲ့ email address) နဲ့ Password တို့ကိုဖြည့်ပြီးတော့ Login ၀င်လိုက်ပါ။ အောက်မှာပုံလေးကိုကြည့်ရအောင် . . .
မိမိရဲ့အကောင်ကိုရောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့အကောင့်ကိုဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ မိမိအကောင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်အချို့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ . . ( My Account; My Files; စသည်တို့ကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေ၊ အခြားမိမိလိုအပ်တာတွေကို ထပ်ဖြည့်တာတွေ၊ မလိုတာကို ပြန်ဖျက်တာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Uploading အကြောင်းအဓိကဆိုတော့ Uploading နဲ့သက်ဆိုင်တာကိုပဲ ဆက်ဆွေးနွေးကြ ရအောင်။ My Account ဆိုတဲ့မိမိရဲ့အကောင့်အောက်မှာ Upload ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီ Upload ရဲ့အောက်မှာ box လေးတစ်ခုရှိ ပြီးတော့ box လေးဘေးနားမှာ Browse ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီ Browse လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ မိမိတို့ Upload တင်ချင်တဲ့ ဖိုင်လေး ရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်းပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ “Upload” ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါမှာမဟုတ်ရင်လဲ Logout tag လေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ Upload File ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ ဖိုင်တွေကို တင်လို့ရပါတယ်။ အောက်မှာပုံလေးပါ . . .
Upload ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ ဖိုင်ကို Upload စတင်နေတဲ့အကြောင်းကို Upload in progress bar လေးပြပြီးတော့။ ဖိုင်ရဲ့ဘယ်လောက် percent ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်လောက် speed နဲ့ ဖိုင် upload လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်အကြီး၊ အသေးနဲ့ကွန်နက်ရှင် ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အချိန်အနည်းနဲ့အများကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထပ်ပိုများတာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Multiple files Upload ဆိုတဲ့နေရာမှာ Down arrow လေးချပြီးတော့ “1” ကနေ “10” ရွေးပြီးတော့ မိမိတို့တင်ချင်တဲ့ဖိုင်အများအပြားကိုတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာကတော့ ဖိုင်တင်နေတဲ့အကြောင်းပြထားတဲ့ပုံပါ။ (မိမိမတင်ချင်တော့ရင် Cancel နှိပ်ပြီးတော့ ဖိုင်ဆက်မတင်လဲရပါတယ်။)
ဖိုင်အားလုံးတင်ပြီးရင်တော့ အခြားသူများကိုမျှဝေဖို့အတွက် Download Link web page ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Download link ပေးထားတာကို copy လုပ်ပြီးတော့ အခြားသူများကိုဖြန့်ဝေနိုင်ပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ် mail ကနေတဆင့်အခြားသူငယ်ချင်းများကို ဖြန့်ဝေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာရှိတဲ့ Send the Document Files(s) Link to your Friends ဆိုတာကနေ email ကနေတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အောက်မှာပုံလေးပါ . . .
အခုဆိုရင်တော့ Ziddu ကနေ Upload တင်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ။ Upload တင်ပြီးသွားရင်တော့မိမိအကောင့်ကို Log out လုပ်ပြီးတော့ ပြန်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ Do you wish to logout? ဆိုပြီးတော့ Yes or No မေးပါလိမ့်မယ်။ မိမိထွက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ Yes လုပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်နိုင်ပါတယ်။ Download ချဖို့အတွက်ကိုတော့ အောက်မှာဆက်ကြည့်ရအောင်။
Ziddu Download လုပ်နည်း . . .
Ziddu site ကနေ Upload တင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ချမယ်ဆိုရင် ဒေါင်းလုပ်ချမယ့်လင့်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့အောက်မှာ ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဒေါင်းလုပ်ချမယ့်လင့်လေးပွင့်လာပြီးဆိုတာနဲ့ “Download” “Share” “Link” ဆိုတဲ့ tag box လေးတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေမှ “Download” ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ မိမိတို့ဒေါင်းချင်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ဖို့အတွက် “Thank you for Downloading” ဆိုတဲ့ boxလေးချလာပြီးတော့ File size နဲ့ Code နံပါတ်လေးတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ဖို့နဲ့boxလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကပေးထားတဲ့ Code နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့် ပြီးတော့ Download ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင်တော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခုဆိုရင်တော့ Ziddu ကနေ ဖိုင် Uploading နဲ့ Downloading လုပ်ဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လိုအပ်ချက်များနဲ့အမှား များရှိပါက သည်းခံခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ (နေမကောင်းလို့စာလုံးပေါင်းတော့သေချာပြန်မစစ်ထားဘူး။ စာလုံးပေါင်းမှားရင် လဲမှားတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ။)
ကိုဂျိန်း, ဒဿဂီရိ, ဖယောင်း, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, Aung Aung, bonge, chitnyimalay, goldstar, minthumon, moe san dar, phoetharlay, phyomyintthein, tu tu, Ye Aung, zo, Zorro
အကိုရေ...အကိုပေးထားတဲ့linkတွေထဲက yousenditကတော့ကံကောင်းထောက်မပြီးအနော်တို့စက်ရုံမှာဖွင့်လို့ရပါတယ်....ကျန်တဲ့linkတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲblockခံထားရပါပြီ....အနော်ဆီမှာက mediafire,zshare,ifileကျန်တဲ့linkအတော်များများကိုblockထားပါတယ်ဗျာ....yousenditကိုဘယ်လိုsign up လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ် သူတို့ပြောတဲ့Promotion codeဆိုတာဘာမှန်းမသိလို့ပါသုံးပုံသုံးနည်းလေးသိချင်ပါတယ်ဗျာ....ရှဲရှဲပါနော်
mediafire,zshare တို့ကိုblockထားတာကိုဖွင့်ချင်ပါတယ်အနော်တို့administratorကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲမသိဘူး အရင်ကဖွင့်လို့ရပါတယ် ကူညီပါဦးနော်....
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ arkaraung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, minthumon, moe san dar, zo
ဒီနေရာကနေ lite ဆိုတဲ့ အောက်ကနေ sign up လုပ်ပါ...promotion code ထည့်စရာ မလိုပါဘူး..ပြီးရင် submit ပေါ့..အီးမေးအကောင့်ကို activate လုပ်ဖို့ အတွက် နောက်တစ်ဆင့်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်..ပြီးရင် အီးမေးဖွင့်ပြီး activate လုပ်လိုက်ပါ..
application ကို ဒီအောက်ကလင့်မှာ download for window ဆိုတာကနေ ဒေါင်းပြီး အသုံးပြလို့ရပါပြီ..
အသုံးပြုနည်းက လွယ်ပါတယ်...ဖိုဒါ လိုက်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် add folder ကနေ ဖိုင်ကို upload လုပ်ပေါ့..file လိုက်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ add file ကနေ အပ်လုပ် လုပ်ပါ..100 mb send လို့ရပါတယ်..
အဆင်မပြေတာများ ရှိရင် ပြန်ပြောခဲ့ပါ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ ဇော်ရဲပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, ဖယောင်း, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ဖြိုးယံလေး, arkaraung, Aung Aung, bonge, minthumon, moe san dar, phyomyintthein, tu tu, zo
YouSendit ကနေ Upload တင်ကြရအောင် . . .
http://www.yousendit.com/ ကို ၀င်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ အောက်က webpage လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီwebpage လေးကျလာပြီးဆိုရင်တော့ မိမိအကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အကောင့်နဲ့ ဆိုဒ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ အကောင့်မရှိလဲ ဒီအတိုင်းဝင်သုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အပေါ်က ပုံလေးအတိုင်းမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Try Sending now ဆိုတဲ့အောက်ကနေ ဖိုင်တွေကို တစ်ယောက်ကနေအခြားသူများကို ပြန်ပြီးတော့ ဝေပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Try sending now ဆိုတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ “To” :(Separate multiple emails by comma) ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိပေးပို့ချင်တဲ့ သူများရဲ့ email address များကို တစ်ယောက်မက၊ အခြားလူများအတွက် (,) Comma တွေခံပြီးတော့ ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ (ဖိုရမ်တွေ၊ ဘာတွေမှာမျှဝေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိအကောင့်နှစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏသုံးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။)
From: ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ မိမိရဲ့ email address ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ email ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ အဲဒီလင့်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘေးနားမှာရှိတဲ့ check box လေး (Remember my email ဆိုတဲ့ check box) လေးမှာ အမှန်ခြစ် ခြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့မခြစ်ပေးလဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
Subject (Optional) ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ မိမိတို့ ဖိုင်ရဲ့နံမည်ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားသူများကိုသိစေချင်တဲ့အကြောင်းရာတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်ရေး ထည့်ပြီးတော့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
Enter message (Optional) ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ မိမိတို့အခြားသူများကို သီချင်းဆိုလဲနားထောင်ကြည့်ပါတို့၊ စာအုပ်ဆိုလဲ ဖတ်ကြည့်ပါတို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ စာတိုလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပါသွားမှာဆိုတော့ မိမိတို့ပြောချင်တာကို အတိုချုံ့ပြောလို့ရပါတယ်။
Selectafile (Max100MB) larger file? ဆိုတဲ့နေရာရဲ့အောက်နားမှာ boxလေးရှိပါတယ်။ အဲဒီ box လေးဘေးနားမှာ Browse လေးရှိပါတယ်။ အဲဒီ Browse ကနေ မိမိတို့ပေးပို့ချင်တဲ့ ဖိုင်ရှိတဲ့နေရာကို ညွှန်းပြပေးလိုက်ပါ။ ဖိုင်တစ်ခုထပ်ပိုတယ်ဆိုရင်တော့ Add another file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထပ်ပိုတဲ့ဖိုင်တွေကို တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြီးရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ check box လေးခုကိုတော့ Login Userတွေအတွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Login User တွေအနေနဲ့လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ဟာကိုပဲ check လုပ်နိုင်ပါတယ်။ check မလုပ်ဘဲဒီအတိုင်းပို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အောက်ကပုံလေးမှာတော့ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်ပြီးတော့ ရှင်းပြထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြည့်ပြီးသွားရင်တော့ SEND IT ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်တကူနဲ့ပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ဖိုင်ကို sending လုပ်နေတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။
မိမိဖိုင်တင်တာ အားလုံးအဆင်ပြေစွာပြီးစီးသွားကြောင်းကိုတော့ Success ဆိုတဲ့ webpage နဲ့မိမိနဲ့အခြား သူများဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ဖို့ အတွက်ကို Download link ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးမှာတချက် ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
အခုဆိုရင်တော့ Yousendit ကနေ ဖိုင်တွေကို Uploading လုပ်တာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အောက်မှာ Download လုပ်ဖို့အတွက် Yousendit ကနေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားပါတယ်။ (အရမ်းမခက်ပါဘူးခင်ဗျာ။)
YouSendIt Download . . .
Yousendit ကနေဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ချမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ဒေါင်းချင်တဲ့ yousendit ကဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ဖွင့်ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Download ဆိုတာတွေကိုတွေ့မြင်ရပါမယ်။ အဲဒီ Download ဖိုင်လေးကို ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ yousendit ကဖိုင်ကို အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့မိမိတို့ဖိုင်သိမ်းထားချင်တဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။
အခုဆိုရင်တော့ yousendit ကနေ Upload & Download အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်နေ့မှအခြား Upload ဆိုဒ်တွေ အကြောင်းရေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။
Yousendit နဲ့ဖိုင်တွေပို့မယ်ဆိုရင် ရက်ကတော့ သိပ်မရပါဘူးခင်ဗျာ။ (၇ရက်၊ ၁၄ရက်) အဲဒီလောက်ပဲအများဆုံးရမှာပါ။ Yousendit က မြန်မာနိုင်ငံconnectionနဲ့ဆိုရင် Bagan connection ထက်၊ MPT Connection မှာအလုပ်လုပ်တာပိုမြန်ပါတယ်။
Send6site ကဆိုလဲ ရက်တော့သိပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်ပိုးကောင်လေးရှာတွေ့ထားတဲ့ Upload ဆိုဒ်လေး ကတော့ သုံးရတာတော့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ Upload and Downloading ဆိုဒ်လေး(၂)ခုကတော့ . . . .
yousendit အကြောင်းကူညီပြီးတော့ရှင်းပြသွားတဲ့ ကိုဇော်ရဲပိုင်ကိုလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (ပြောနေကြစကားလေး အတိုင်းပဲ နေမကောင်းလို့စာတွေတော့သေချာပြန် မစစ်ထားမိဘူးဗျာ။ တကယ်နေမကောင်းဖြစ်နေသေးလို့ပါ။အမှားများ လိုအပ်ချက်များရှိပါက နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ။)
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ poekaunglay87 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, ဖြိုးယံလေး, arkaraung, Aung Aung, bonge, goldstar, minthumon, moe san dar, phyomyintthein, tu tu, zinnaing, zo
ကျွန်တော်တစ်ခုတွေ့လာလို့ဗျ http://up4vn.com/ ဆိုတဲ့ဆိုက်လေးပါ။ ပိုကောင်လေးလိုတော့ သေသေချာချာ ရှင်းမပြတတ်ဘူး ဒီကောင်လေးက လွယ်ပါတယ်. မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် အဆင်ပြေမပြေတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဒီကောင်က rapidshare.com, megaupload.com, bigandfree.com, mediafire.com, ifile.it, hotfile.com တွေကို ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုမကောင်းတာက ဖိုင်တိုင်းကိုတင်မရတာပါပဲ jpg, gif, png, jpeg,docx, txt စတဲ့ဖိုင်တွေကိုတော့ တင်လို့မရပါဘူး။ upload တင်တာက လွယ်ပါတယ်။ မလုပ်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေသွားအောင် upload တင်နည်းလေးကို အကြမ်းမျဉ်းလေးပြောပြခဲ့ပါ့မယ်။
up4vn.com မှာ upload တင်နည်း
upload တင်ရတာကတော့ လွယ်ပါတယ် ပထမဆုံးအနေနဲ့ http://up4vn.com/ ကိုဝင်လိုက်ပါ ဘာအကောင့်မှ မလိုပါဘူး။ ၀င်လိုက်တာနဲ့ အောက်က ပုံလေးအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပြီးသွားရင်တော့ Browse လေးကိုနှိပ်ပြီး ကို upload တင်ချင်တဲ့ ဖိုင်လေးကို နှိပ်ပြီး upload File ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ upload တင်လို့ ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံလေးထဲက အတိုင်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာမှ ဆက်လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး Share URL ဆိုတာလေးကိုယူလိုက်ယုံပါပဲ။ BB Code လဲပေးထားပြီးသားပါ။ မသိတဲ့သူဆို မျက်စိလည်မှာဆိုးလို့ အဲ့ဒါကို ပြောပြတော့ဘူး။
Download ချမယ်ဆိုလဲ လွယ်ပါတယ် Download လင့်ကို အရင်ဝင်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံလေး အတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ကြိုက်တဲ့ဆိုက်ကနေ Download ဆွဲနိုင်ပါပြီ။
ရှင်းလို့တောပီးပီ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ဖို့တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ သူများရှင်းမရှင်းတော့ မသိဘူး ကိုယ့်ဟာကိုတော့ ရှင်းတယ်လို့ ထင်တာပဲ
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ ဒဿဂီရိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဖယောင်း, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း, academy, arkaraung, bonge, maJunior, minthumon, moe san dar, phyomyintthein, tu tu, yawnathan, zo
Multiple File-Hosting Sites များအကြောင်း
Applications တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ Movies တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ သီချင်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်ခြား ဘာဖိုင်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် Hosting တစ်ခုခုကို တင်ထားပြီးရင် Links တွေ သေသေကုန်တဲ့ ပြဿနာက ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်အတွက် တော်တော်လေး စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ပြဿနာပါ။ တင်ပေးတဲ့ သူအတွက်လည်း အကျိုးမရှိတော့သလို - ဒေါင်းလုပ်ချချင်တဲ့ သူအတွက်လည်း ဒေါင်းလုပ်ချမယ် ကြံတိုင်း Links တွေသေသေနေတော့ တော်တော် စိတ်ကုန်စရာပါပဲ - ဒီလိုဖြစ်ရတာက Hosting sites တွေက ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ Links တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချမယ့်သူ မရှိရင် ခဏချင်းနဲ့ ဖျက်ဖျက် ပစ်တတ်တာရယ် - တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ File name တွေက Copyright နဲ့ ညှိနေလို့ အဖျက်ခံရတာမျိုးတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖျက်ခံရ ခံရ Posts တွေပဲ ကျန်ခဲ့ပြီး Links အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ စာတွေဆိုတာ Spam သဘောမျိုးနဲ့ ဘာမှ သိပ်မခြားလှပါဘူး - ဒါ့ကြောင့် အဖျက်ခံရ တာခြင်း တူရင် Site တစ်ခုက ဖျက်လိုက်တဲ့ အခါ နောက်တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ဖိုင်တွေ ကျန်နေအောင် - တစ်လလောက်နေရင် အဖျက် ခံရမယ့် ဖိုင်ကို ၃ - ၄ လလောက်တော့ ခံကောင်းခံအောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်။
ဒီအကြောင်းအရာက တကယ်တော့ လူတော်တော်များများသိပြီးသားပါ - အဓိက ရေးဖြစ်တာကလည်း ဖိုရမ်မှာ Upload တင်ပြီး မျှဝေချင်သူတွေအတွက် ကိုယ့် ဖိုင်တွေကို ခဏချင်း အဖျက်ခံရတာမျိုးကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး တားဆီးထားနိုင်အောင်ရယ်- အဲလို တားဆီးထားနိုင်ခြင်း အားဖြင့် ဖိုရမ်မှာ ခဏခဏ Links တွေပျက်လို့ ပြန်ပြန်တောင်းရတဲ့ ပြဿနာမျိုးကနေ ဖြေရှင်းပြီးသား ဖြစ်အောင်ရယ် သင့်တော်တဲ့ Multiple File-Hosting Sites တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ။
Multiple File-Hosting Sites ဆိုတာ ကိုယ်က ဖိုင်တစ်ခုတည်းကို Site တစ်ခုတည်းမှာ တင်လိုက်ယုံနဲ့ သူကနေပြီး တစ်ခြား သူနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Hosting Sites တွေဆီ သူ့အလိုလျောက် တင်ပေးသွားမယ့် Sites တွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီ Multiple File-Hosting Sites တွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ခဏခဏ Links ပျက်တဲ့ ပြဿနာကနေ အချိန်တော်တော်ကြာကြာထိ ထိန်းထားနိုင်သလို ဆိုဒ်တစ်ကာလှည့်ပြီး တစ် site မှာ တစ်ခါ file upload တင်နေရတဲ့ ဒုက္ခကနေလည်း သက်သာစေပါတယ်။
ခုဒီအောက်မှာ Multiple File-Hosting Sites ( ၁၁ ) ခုနဲ့ ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
( 1 ) InterUpload
ကျွန်တော် Multiple File-Hosting Sites တွေရဲ့ ကြားထဲမှာ Interupload နဲ့ Mirrorcreator ကို တော်တော် သဘောကျပါတယ်။ အရင် ကျွန်တော် သုံးနေကျက Multiupload ပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတော့ မြန်မာနိုင်ငံက မိသားစုဝင်တွေ Download ချဖို့အတွက် ဆိုရင် Ifile တို့ Mediafire တို့ ပါမှ အဆင်ပြေကြတာ သတိထားမိပါတယ်။ အဲတာကြောင့် Multiple File-Hosting Sites တွေရဲ့ ကြားထဲမှာမှ Ifile တို့ Mediafire တို့ကို တစ်ပြိုင်နက် Host လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Multiple File-Hosting Sites တွေကို လိုက်ရှာတော့ ဒီ ဆိုဒ်လေးကို တွေ့ခဲ့တာပါ။ အသုံးပြုရလည်း လွယ်သလို Register လုပ်ထားသည် ဖြစ်စေ မလုပ်ထားသည် ဖြစ်စေ Upload တင်လို့ ရပါတယ်။ တစ်ခါတင်ရင် အနည်းဆုံး ဖိုင် ( ၃ ) ခု တစ်ပြိုင်နက် တင်လို့ ရပါတယ်။
(2) MirrorCreator
MirrorCreator ကလည်း ထိပ်တန်း free file hosting services တွေဖြစ်တဲ့ Rapidshare, Megaupload, Mediafire, Ifile, အပါအဝင် တစ်ခြား hosting services တွေဖြစ်တဲ့ Deposit files, Easy Share, Badongo, Load To, FlyUpload .. တွေဆီလည်း လွှဲပြောင်း Upload တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူသလို Register လုပ်ထားသည် ဖြစ်စေ မလုပ်ထားသည် ဖြစ်စေ Upload တင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတင်ရင် အနည်းဆုံး ဖိုင် ( ၃ ) ခု တစ်ပြိုင်နက် တင်လို့ ရပါတယ်။
(3) MultiUpload
MultiUpload ကို ကျွန်တော် သဘောကျရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက သူ့ဆီမှာ Upload တင်ဖို့အတွက် သူ့ဆိုဒ်ကို လာစရာမလိုပဲ Multiupload Batch Uploader ကိုသုံးပြီး Windows ထဲကနေ တိုက်ရိုက် တင်လို့ရတာပါပဲ။ နောက်ထပ် ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က Multiupload Batch Uploader ကိုသုံးပြီး Upload တင်တဲ့ Speed ဟာ ကျွန်တော်တို့ သာမန် Site ကိုသွားပြီး တိုက်ရိုက် Upload တင်တဲ့ Speed ထက် ပိုမြန်တာပါ။ Multiupload Batch Uploader ဟာ အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူသလို Register လုပ်ထားသည် ဖြစ်စေ မလုပ်ထားသည် ဖြစ်စေ Upload တင်နိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ အားသာချက် နောက်တစ်ခုက တစ်ပြိုင်နက်တည်းနဲ့ ဖိုင်အားလုံးကို Select ပေးထားပြီး Upload တင်ဖို့စီစဉ်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ ( အပေါ်က ဆိုဒ်တွေလိုမျိုး တစ်ခါတင် ( ၃ ) ဖိုင်ဆိုတာမျိုးတွေ မရှိပါဘူး။ ) Multiupload Batch Uploader ကို ဒီနေရာကနေ Download ချနိုင်ပါတယ်။
(4) Gazup
Gazup ကလည်း Multiple File-Hosting Sites တွေထဲမှာ နာမည်ရတဲ့ website တစ်ခုပါပဲ။ Gazup ကို သုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ ဖိုင်တွေကို တစ်နေရာတည်းကနေ Rapidshare, Badongo, zshare, 2shared, Netload, နဲ့ FileFactory ဆိုတဲ့ Hosting Sites တွေဆီ တစ်ပြိုင်နက်တည်း လွှဲပြောင်း တင်လို့ ရပါတယ်။
(5) UploadMirrors
UploadMirrors.com ဆိုတာကလည်း သူ့ Sever ကို Upload တင်လိုက်ယုံနဲ့ တစ်ခြား free file hosts တွေဆီ အလိုလျောက် Upload လွှဲပြောင်းတင်ပေးသွားမယ့် Site တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
(6) Upload Jockey
UploadJockey ဆိုတာလည်း အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ Site တစ်ခုပါပဲ။ Free အသုံးပြုနိုင်ပြီး UploadJockey မှာ Upload တင်ပြီး files တွေ share လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အပိုဝင်ငွေရှာလို့ပါ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း UploadJockey ကိုများ ပြောင်းသုံးရင် ကောင်းမလား မသိ :D
(7) QOOY
QOOY နဲ့ UploadMirrors နဲ့က တော်တော်လေး ဆင်တူပါတယ်။ သူ့ Site မှာ တစ်နေရာတည်း တင်လိုက်ယုံနဲ့ တစ်ခြား hosting services တွေဆီ ဖြန့်တင်ပေးတာချင်းလည်း တူတူပါပဲ။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
( 8 ) ShareBee
Sharebee.com >> သူကလည်း Multiple File-Hosting Sites တွေကြားထဲက တစ်ခုပါ။ မြန်မာ sites တော်တော်များများမှာ ဒီ Site လေးကို သုံးတာ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူလည်း သုံးရတာ မဆိုးလှပါဘူး။
(9) RapidSpread
UploadJockey တို့ တစ်ခြား Multiple File-Hosting Sites တွေအတိုင်း Rapidspread ကလည်း Hosting sites ( ၉ ) ခုဆီ ခွဲတင်ဖို့ ခွင့်ပေးပါတယ်။ ads တွေတော့ နဲနဲ များလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သုံးပျော်ပါတယ်။
( 10 ) FileDucky
Fileducky က တစ်ခြား Multiple File-Hosting Sites တွေနဲ့ တူပေမယ့် support ပေးတဲ့ Hosting sites နဲပါတယ်။ သူ support ပေးထားတာ rapidshare, badongo, sendspace, zshare လောက်ပဲ မို့လို့ သိပ်တော့ ကျေနပ်စရာ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘဲရုပ်လေးလှတော့ မကြာခဏ ရောက်ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ :D
( 11 ) MassMirror
MasMirror ကလည်း files တွေ share လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ site တစ်ခုပါပဲ။
ခု ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Multiple File-Hosting Sites အကုန် မဟုတ်သေးပါဘူး - အင်တာနက်ထဲမှာ ခုလိုပဲ လုပ်ဆောင်ချက် ဆင်တူတဲ့ နောက်ထပ် Multiple File-Hosting Sites တွေ များစွာ ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲတာတွေထဲက မိမိသဘောကျတဲ့ site တစ်ခုခုကို ရွေးပြီး ဖိုရမ်မှာ files တွေ မျှဝေတဲ့ အချိန် Upload တင်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုကြဖို့ ကျွန်တော် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အဲတော့မှ Links ခဏခဏပျက်တဲ့ ပြဿနာကို ကာလတစ်ခုလောက်ထိ ထိန်းထားနိုင်ပြီး မိသားစုဝင် အသစ်တွေ အနေနဲ့ စိတ်လက်ချမ်းသာစွာနဲ့ Download ချဖို့ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။
မိသားစု အားလုံး တတ်စွမ်းသမျှ မျှဝေရင်း မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်မှာ လည်ပတ်လေ့လာနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း လိုက်ပါတယ်။
Last edited by KznT; 18-02-2011 at 06:01 PM..
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုပျင်း, ကိုဦး, ဆန်းမောင်, ဘဘကြီး, မျိုးဟန်ထက်, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, သောကြာသား, alwslov, amaung344, azp09, bonge, chitnyimalay, daya, hellboy, minthike, minthumon, moe san dar, phoelapyaee, phoetharlay, stilpars, tu tu, yawnathan, zo
ပြန်စာ - Multiple File-Hosting Sites များအကြောင်း
ကို KznTေ၇ ဒါအေ၇းကြီးအကြံပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖိုင်တွေတင်မယ်ဆို Mediafire နှင့် Ifile လောက်ဘဲ သိတာပါ ။ ကွန်ပျူတာကို အခုမှ လေ့ လာနေတဲ့ သုတွေထဲက အပါအဝင်ဆိုတော့ အခုလို ပြောပြတာ တော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ကွန်ပျုတာ problem တွေမဖြေ၇ှင်းနိုင်သေးပေးမယ့်တတ်နိုင်တဲ့ အကုအညီကိုပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ upload တင်ပေးဖို့ ဆိုတာ အ၇င်က မကြားဘူးဘူးလေ ။ ဒီဖို၇မ်ေ၇ာက်မှ ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ သိလာတာပါ ။
အခုချိန်အထိတော့ကိုယ်က များများယူပြီး နည်းနည်းဘဲပေးနိုင်သေးတယ်ဗျာ ..။ ဒါဆို နောက်နေ့ကစပြီး စပြီး အသစ်အဆန်းလေးတွေနဲ့upload တင်မယ်ဗျာ.....။
ကိုဂျိန်း, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, alwslov, Empathlover, KznT, minthike, minthumon, moe san dar, yawnathan, zo
ပြန်စာ - Uploading site တွေပြောင်းရအောင်
ကျွန်တော်ရှာတွေ့ထားတဲ့ (free) တင်လို့ရတဲ့ဆိုက်လေးတွေကိုညွန်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။
Send your File 100 Mb to over 1 GB (free)
Free တွေပါဘဲ တခုပြီးတခုအသုံးပြုကြည့်ပါ...
ကိုပျင်း, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, Empathlover, g00gle, minthike, minthumon, nitutx, zo
ခုလိုပြောပြထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လို မသိသေးသူတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
Last edited by PyaitSone; 20-03-2011 at 02:55 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ yanhtunlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, Empathlover, minthike, minthumon, zo
Find More Posts by yanhtunlay
ပြန်စာ - Application တော့မဟုတ်ပါဘူး ဖေ့ဘုတ်ခ်ကိုေ&#
အင်တာနက်ထဲမှာဖိုင်ကို အွန်လိုင်းမှာတင်ထားလိုက်ရင် ကြိုက်တဲ့နေရာကနေ ဆွဲယူနိုင်တာပါပဲ............. ဒါပေမယ့် အခုလို တင်ဖို့ကျ အကောင့်ဖောက်ရတယ်။ သူများကို အဲဒီဖိုင်တွေ မျှဝေချင်ရင် ( ပါ့စ၀ါ့စ် ) ကိုယ့်အကောင့်ပါ့စ၀ါ့ပေးရတယ်။ အဲလို ရှုပ်ထွေးတဲ့ အဆင့်အားလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တာက ... ဒီဆိုက်လေးပါ
သည်ဆိုက်လေးက ဖိုင်တွေမျှဝေရာမှာ အရိုးရှင်းဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
(၂) create နှိပ်တာနဲ့ ဖိုင်တွေကို Box တစ်ခုထဲမှာ ထည့်ထားတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
(3) Box ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေမည်ပေးပါ။
ဥပမာ. MY files ဆိုပြီးပေးထားလိုက်ပီး၊ ဖိုင်တွေထည့်ထားပါ။
အကောင့်ဖောက်စရာ ပါ့စ၀ါ့သုံးစရာမလိုတဲ့ဆိုက်ကလေးပါ။ စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။
မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, amaung344, arkaraung, bagothar85, bonge, Empathlover, g00gle, minthike, moonson, zo
ဒီလင့်လေးက အမသုံးတာတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေတယ် Uploading ထက် Download ချတဲ့လူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါတယ် သူ့ကို Uploading ပြီးရင်
ဒီကနေတစ်ဆင့် create download Link မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါ
ခုအောက်မှာပေါ်တဲ့ပုံလေးထဲမှာ လေးထောင့်ကွက်လေးထဲက လင့်လေးကို တင်ပေးလိုက်ရင် down တဲ့လူက လင့်ကိုနှိပ်လိုက်တာနှင့် Down တဲ့ဖိုင်တန်းကျလာပါမယ်
ဘ၀ထိုထို၊ နောင်အဟိုဝယ်၊ ငါ့ကိုယ်ကြောင့်သာ၊ သူတို့မှာလျှင်
နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်၊ တစ်စိတ်စိတ်မျှ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ကျရပါစေနှင့်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ goldstar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, တာတာ, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, arkaraung, bonge, g00gle, minthike, pannuko, putty, zo
how to, knowledge, websites
Dynamic Web Site လုပ်နည်းသိချင်လို့ပါ။ ကောင်းကောင်း ဆွေးနွေးချက်များ731-05-2010 11:04 AM
Oosah is an Internet site that offers 1TB (1000GB) of Web space.. ကြယ်စင်မင်း Websites များနှင့်ပတ်သက်၍004-09-2008 05:27 PM
Adding Web site Links to your Start panel ကိုဖြိုးငြိမ်း ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ022-07-2008 04:23 AM